SAFIF SPAA 10 FJKM Miantso ny mpino handray andraikitra
Niangavy ny mpino Kristianina hitrotro amim-bavaka ny Firenena sy ny Fiangonana manoloana izao vanim-potoana sarotra lalovantsika izao omaly ny
avy eo anivon’ny SAFIF SP AA10 na sampan’asa fitoriana ny filazantsara synaodam-paritany Antananarivo andrefana eo anivon’ny fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM. Mampahatsiahy antsika mba hanohana hatrany ny madiniky ny Tompo eny amin'ny Toby ka hanatitra sakafo sy filana an-davan’andro na PPN ary izay azon'ny isam-pitandremana sy isam-batanolona atao. Fantatra ny fahasahiranantsika rehetra nefa tsarovy ny iray tam-po amintsika, hoy hatrany ny SAFIF. Enga anie mba tsy ho amintsika ny fanontaniana ao amin’ny Jaona voalohany 3:17 hoe ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao, ary mahita ny fahantran'ny rahalahiny ka mihirim-belona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Fa irina kosa ianao handray ny hafatry ny Soratra Masina hoe Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azon'ny tananao atao, fa Andriamanitra no momba anao, izay voasoratra ao amin’ny Baiboly hatrany ao amin’ny Samoela voaloha 10:7, hoy hatrany ny hafatra.